Kooxda Manchester City oo raqiis ku helaysa weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda Manchester City oo raqiis ku helaysa weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez
13-10-2017) Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay go’aansatay inay dalab 20 milyan oo ginni ah kula soo wareegto weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Xilliga xagaaga, City ayaa diyaar u ahayd inay bixiso lacag ka badan 50 milyan oo ginni maadaama uu Sanchez, qandaraaskiisa Emirates Stadium uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa hore u sheegay in xiddiga heerka caalami ee dalka Chile uu garoomada sii joogi doono heshiiskiisa inta ka dhiman, laakiin tababaraha Gunners ayaa sheegay inay kooxdu furan tahay inay iibiso xiddigooda xilli ciyaareedka 2018ka.
Sida laga soo xigtay The Mirror, City ayaa weli xiiseyneysa suurtogalnimada ay kula soo saxiixan karto Sanchez marka uu furmo suuqa kala iibsiga, laakiin tababaraha kooxda Pep Guardiola ayaan dooneynin inay kooxdiisa bixiso lacag aan ka badnayn 20 milyan oo ginni markii City a.
28 jirkaan ayaa hal gool dhaliyay todobo kulan xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan